“War jooga oo hadda iga IIBIYA Real Madrid haddii kale”.- Goolhaye Courtois oo Chelsea ugu Goodiyay in… – Gool FM
“War jooga oo hadda iga IIBIYA Real Madrid haddii kale”.- Goolhaye Courtois oo Chelsea ugu Goodiyay in…
Byare August 1, 2018
(London) 01 Agoosto 2018. Goolhaye Thibaut Courtois ayaa dhagaha ugu dhibciyay Chelsea war ay aad uga nexeen taageerayaasha Chelsea.
Xiddiga reer Belgium ayaa u sheegay Blues inuusan heshiis cusub u saxiixeyn isla markaana ay hadda ka iibiyaan Real Madrid amaba uu si bilaash ah uga tagi doono xagaaga soo socda marka uu ka dhoco qandaraaskiisa.
Chelsea ayaa aad u dooneysa inay xafidato goolhayaheeda Courtois waxayna diyaar u tahay inay u gacan galiso qandaraas qaali ah uu waqti dheer ku joogayo kooxda.
Yeelkeede 26 jirka ayaa ku wargaliyay kooxdiisa inuusan dooneyn heshiis cusub isla markaana uu doonayo in kooxda laga fasaxo isla bishan gudaheeda, haddii kale uu beeca xorta ah uga tagi doono 12 bilood kaddib markuu dhoco qandaraaskiisa.
Haddaba Chelsea ayaa looga fadhiyaa inay 9-maalmood gudahood ay go,aan ku qaadato ka hor inta uusan suuqa ku xirmin oo haddii kale waxay ka sabri doonaan 35 milyan ay ku soo iibsadeen wiilka reer Belgium, maadaama uu u faruuryo qaniinsanayo inuu bilaash kaga tago isla markaana uusan qandaraas cusub u saxiixin.
Macallinka Cusub ee Chelsea Maurizio Sarri ayaa isagu doonaya fursada uu waji ka waji ula hadlo Courtois si uu ugu qanciyo in Woqooyiga London ay tahay meesha ugu fiican si uu ugu sii nagaado Shanta sano ee soo socota.
Thierry Henry oo Mushaarkiisa hoos u dhigaya si uu Tababare ugu noqdo Maxamed Saalax...(Sidee??)
Taageerayaasha kooxda Liverpool oo ku jees jeesay Everton sababa la xiriira Lucas Digne